Iikholeji zase-Oklahoma: I-SAT Score Ukuthelekiswa kokungeniswa
Ukuqhathaniswa kwamacala ohlangothini lweeNkobe zeeKholeji zase-Oklahoma
Iikholeji zeminyaka emine yase-Oklahoma zimela uluhlu lweendlela ezininzi. Uya kufumana iikholeji ezinkulu zaseburhulumenteni kunye neekholeji ezizimeleyo. Kanye kunye neekholeji ezipheleleyo, uya kufumana izikolo ezinezempilo, iteknoloji kunye nenkolo yonqulo. Imilinganiselo yokumkelwa kwamanye amazwe iyahluka ngokubanzi, ukusuka kwiYunivesithi yaseTulsa ekhethileyo kwizikolo ezininzi ezivunyelwe ukuvunywa.
Izikolo ze-SAT zeeKholeji zase-Oklahoma (phakathi kwama-50%)
College Bacone 380 460 360 460 - -
KwiCyunivesithi yaseCameron kuvunywa
KwiYunivesithi yaseMpuma 370 430 480 590 - -
University of Langston kuvunywa
I-Mid-America Christianity University kuvunywa
KwiYunivesithi yaseNorthern-state 443 505 430 590 - -
IYunivesithi yeNorth State State University - - - - - -
IYunivesithi yaseK Oklahoma Baptist 460 600 460 565 - -
IYunivesithi yaseKhristu 470 620 470 600 - -
University of Oklahoma 500 630 490 598 - -
I-Oklahoma Panhandle State University - - - - - -
IIklahoma State University 480 590 490 610 - -
I-Oklahoma State University-eKorgan City kuvunywa
IYunivesithi yaseKorea Wesleyan 410 510 420 590 - -
University of Oral Roberts 470 568 440 560 - -
IRogers State University - - - - - -
University of Saint Gregory ukuvavanywa kwamathuba okuvota
I-University of Oklahoma State University - - - - - -
KwiYunivesithi yaseMzantsi Nazarene kuvunywa
KwiYunivesithi yamaKhristu aseMzantsi 350 510 350 510 - -
IYunivesithi yase-Oklahoma State University - - - - - -
KwiYunivesithi yaseCentral Oklahoma - - - - - -
KwiYunivesithi yase-Oklahoma 520 665 540 680 - -
IYunivesithi yeSayensi kunye noBugcisa base-Oklahoma 395 500 420 510 - -
Yunivesithi yaseTulsa 550 690 550 700 - -
Ukukunceda ukuba ufumanise ukuba izikolo zakho ze-SAT zijoliswe kwizikolo zakho zokukhetha eziphezulu zase-Oklahoma, itheyibhile engentla iyakunikhokela. Amanqaku e-SAT etafileni angama-50% aphakathi kwabafundi abathathi-matriki. Ukuba amanqaku akho angena ngaphakathi okanye ngaphezulu kwezi zigaba, ujolise ekumiseni. Ukuba amanqaku akho angaphantsi kweloluhlu oluboniswe kwitheyibhile, ungayeki - gcinani engqondweni ukuba ama-25% abafundi ababhalisile bafumana izikolo ze-SAT ngaphantsi kwezo zidweliswe.
Kwakhona kubalulekile ukubeka i-SAT ngokufanelekileyo. Uvavanyo luphela nje inxalenye yesicelo, kwaye irekhodi elomeleleyo lemfundo kunye neengxaki zokulungiselela iikholeji zibaluleke ngakumbi kuneendlela zokuvavanya. Iikholeji ezininzi ziya kukhangela isicatshulwa esomeleleyo , imisebenzi yentshukumo ebalulekileyo kunye neencwadi ezilungileyo zinconywa .
Qaphela ukuba umThetho uthandwa kakhulu kuneSAT e-Oklahoma, kwaye kwezinye izikolo ezingaphezu kwe-90% zabafundi bangenise izikolo ze-ACT.
Ngenxa yenani eliphantsi leeqaku le-SAT ezichaziweyo, ezinye iikholeji azipapashi idatha ye-SAT. Ukuba ngaba kunjalo esikolweni esikuthandayo, ungasebenzisa ithebula lokuguqula i- SAT kwi-ACT uze ukhangele i-ACT yomxholo wetafile ngezantsi.
idatha evela kwiZiko likaZwelonke leeNkcukacha zezeMfundo
I-SAT Izikolo zokungeniswa kwiiNyuvesi zeNkomfa ze-Big Sky
25 I-Pop Pop yaseCompas Best Best Songs of All Time
Izigqibo Zonyaka Zonyaka Zokomoya Zentsha YamaKristu
I-Anatomy yangaphakathi yeNambuzane
Yintoni iMandla yaseTshayina yaseZulwini?
Ukubamba amaMuskies ngeZithuba
Yenza i-Sandem Magic Sand
I-Adventures yeT Tom Sawyer
Ukulwa nokuphelelwa lithemba
Iinqununu ezi-5 zaseMexican Boxers
Iifrikhi zaseFransi zamahala